Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Fomba 6 mora hijanonana ho azo antoka amin'ny Internet - UnMask Nov
Ny Internet dia fitaovana mahagaga izay nanova ny fomba fiasantsika, mifandray amin'ny namana sy fianakaviana, mahita vaovao momba ny lohahevitra isan-karazany, ka lasa ampahany lehibe amin'ny fiainantsika andavanandro. Araka ny tombantombana, efa mihoatra ny roa lavitrisa ny olona mampiasa aterineto eran-tany, ary efa ho ny antsasaky ny mponina any amin'ny firenena mandroso toa an'i Aostralia, Kanada ary Nouvelle Zélande no efa an-tserasera. Be dia be izany!
Na izany aza, ny voka-dratsin'izany dia mety ho sarotra ny miaro tena rehefa ao anaty aterineto ianao. Ato amin'ity lahatsoratra ity, isika dia handeha amin'ny fomba mora enina ho an'ny olona mijanona ho voaro rehefa mitety ny harato!
Mampiasà VPN rehefa an-tserasera ianao
Ny VPN dia ahafahanao manisy encryption ny fifamoivoizana amin'ny Internet ary mijanona tsy mitonona anarana rehefa mivezivezy amin'ny Internet. Ny tambajotra tsy miankina virtoaly dia tonelina azo antoka eo anelanelan'ny toerana roa samy hafa amin'ny aterineto, izay ahafahan'ny mpampiasa manaisotra ny votoaty voafetra amin'ny geo amin'ny alàlan'ny fisehoana toy ny any amin'ny firenena hafa. Amin'ny fampiasana serivisy VPN dia afaka manafina tsara ny toerana misy anao ianao ary mitazona ny hetsika an-tserasera tsy ho hitan'ny antoko fahatelo toy ny ISP na hackers. Rehefa mifandray amin'ny mpizara ho an'ny daholobe hafa tsy misy fiarovana amin'ny fanafenana, na izany aza, ny hany ho hitan'ny mpanafika dia ireo hafatra voarakotra alefa miverina eo anelanelanao sy ny tranonkala izay ezahinao idirana amin'ny alàlan'ny mpizara proxy misy manodidina. izao tontolo izao—fa tsy hoe iza marina ireo tranonkala ireo! Noho izany, miaraka amin'ity karazana mekanika fiarovana ity, azonao antoka fa ho voaro ny mombamomba anao manokana.
Ampiasao ny fanamarinana roa dingana
Ohatra, raha manana kaonty Gmail sy kaonty Facebook mifandray amin'io adiresy mailaka io ihany ianao, rehefa miditra ao amin'ny pejin'ny kaonty Google ianao dia ho safidy hidirana amin'ny tsindry iray monja amin'ny findainao ho an'ny serivisy roa. Na izany aza, tsy toy ny famerenana ny tenimiafina, izay mampiasa fanontaniana fanamarinana tsotra fotsiny, ny fanamarinana dingana roa dia mitaky anao hampiditra ny nomeraon-telefaoninao. Avy eo, rehefa miditra amin'io serivisy manokana io amin'ny tsindry iray monja, ny tranokala dia handefa kaody amin'ny SMS mivantana amin'ny findainao. Rehefa afaka mandray soa aman-tsara ity hafatra ity ianao ary ampidiro ao amin'ny endrik'izy ireo Pejy kaonty Google, afaka miditra tsy misy olana ianao.
Ohatra fotsiny amin'ny fomba ahoana izany fanamarinana dingana roa miasa ho an'ny kaonty media sosialy satria samy manana ny fomba fampiasana an'io fepetra fiarovana fanampiny io ny sehatra an-tserasera tsirairay; Na izany aza, izy rehetra dia manaraka ny foto-kevitra mitovy amin'ny voalaza etsy ambony izay misy ny fepetra fiarovana tsotra sy avo lenta atambatra izay manampy amin'ny fiarovana ny mombamomba ny tena manokana amin'ny cybercriminals izay mampiasa malware na mangalatra tenimiafina amin'ny alàlan'ny andrana phishing.
Aza hadino ny tranokala mampiahiahy
Tokony hohalavirina ireo vohikala mampiahiahy satria misy votoaty manimba na malware mety hanimba ny solosainao raha mitsidika ireo tranokala ireo ianao. Ohatra amin'ny tranokala mampiahiahy dia ahitana fivarotana an-tserasera misy vidiny "tsara loatra raha tsy marina" sy dokam-barotra momba ny vokatra toy ny vahaolana amin'ny fampihenana lanja izay mampanantena vokatra mahagaga tsy mila fanatanjahan-tena na sakafo. Matetika indrindra, ny hany fomba hamaritana raha azo antoka ny tranonkala iray dia ny fanamarinana ny URL-ny; na inona na inona mety hampidi-doza ny maha-izy anao sy hanimba ny solosainao amin'ny rindrambaiko maloto (malware). Ireo pejin-tranonkala mampiahiahy koa dia mety hamindra ny mpampiasa hiala amin'ny toerana nokasainy amin'ny alàlan'ny doka misy rohy mitondra mankany amin'ny pejy tsy azo antoka, noho izany dia ilaina ny manamarina ny bara adiresy alohan'ny hikitika doka rehetra.
Mba hiarovana ny maha-izy anao sy hitazonana ny fiarovana ny solosainao, dia tsara kokoa ny tsy mitsidika tranonkala mety hampidi-doza anao amin'ny malware na hetsika hafa mampiahiahy. Ny hany fomba hiantohana ny fiarovana amin'ny Internet dia ny fanamarinana ny URL (na adiresin'ny tranonkala); raha tsy izany dia mety havitrika hiala amin'ny toerana halehany ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny doka misy rohy mankany amin'ny pejy tsy azo antoka. Fanao tsara ihany koa ny tsy manindry dokam-barotra na oviana na oviana satria mety hitarika ny mpampiasa mivantana mankany amin'ny tranokala mampidi-doza izay mety hamindra ny fitaovanao amin'ny rindrambaiko manimba toy ny viriosy sy spyware.
Mitandrema amin'izay apetrakao amin'ny Internet
Ataovy azo antoka fa fantatrao ny zavatra alefanao amin'ny Internet. Mety hampidi-doza izany satria tsy azo fafana na averina rehefa misy zavatra tonga any amin'ny cyber. Hiaina mandrakizay ao amin'ny Internet ho hitan'ny olona amin'ny fotoana rehetra any aoriana. Noho izany, alohan'ny hanaovana lahatsoratra momba ny zavatra mety mahakasika ny fiainana manokana na ny fiarovana ny olon-kafa, dia eritrereto hoe ahoana no mety ho fiantraikan'izany amin'izy ireo mandritra ny fotoana maharitra raha mahita ny hafatrao eny an-dalana izy ireo ary tezitra aminao noho izany taona maro aty aoriana. Tsy fantatrao mihitsy hoe iza no mamaky izay soratanao!
Manana adidy isika rehetra mba hifampiaro, ka tsy maintsy mijanona ho tompon'andraikitra isika rehefa mampiasa sehatra media sosialy toy ny Facebook, Twitter, sns… Soa ihany fa tsy misy soratra maharitra, fa ny aterineto dia mandrakizay!
Mieritrereta indroa alohan'ny hampiasana Wi-Fi ho an'ny daholobe
Wi-Fi ho an'ny daholobe tena mampidi-doza ary miteraka risika fiarovana maro. Rehefa mifandray amin'ny tambajotram-bahoaka dia mety hiseho amin'ny fomba maro samihafa ny angonao.
Ohatra, rehefa mampiasa fifandraisana an-tariby tsy misy antoka ianao, dia atahorana hisy olona hanaraka izay karazana tranonkala tsidihinao, izay mety hampidi-doza ny fiainanao manokana na hanakana azy ireo ny fampahalalana saro-pady toy ny laharan'ny carte de crédit izay mety tsy voafehy. Ny tambajotram-bahoaka ihany koa dia iharan'ny fanafihan'ny mpijirika izay mety haka an-keriny ny kaontin'ireo mpampiasa tsy manan-tsiny na manaparitaka malware amin'ny alàlan'ny fitaovana fanararaotana navigateur. Ankoatra izany, raha tsy misy tenimiafina ao amin'ny hotspot Wi-Fi iombonana, dia tsy ho fantatry ny olona raha mifandray amin'ny tambajotra marina izy ireo. Midika izany fa mety hiafara amin'ny fizarana vaovao saro-pady amin'ny olona iray izay afaka mahita izany angon-drakitra izany izy ireo, izay ratsy ho an'ireo izay mifandray amin'ny daholobe toy ny any amin'ny seranam-piaramanidina, fivarotana kafe, na hotely.
Manaova fanaraha-maso background amin'ny tenanao
Ny fisavana background dia famintinana ny vaovao voaangona avy amin'ny firaketana an-tsoratra ho an'ny daholobe. Ireo tatitra ireo dia matetika ahitana tantara momba ny heloka bevava, fifandraisana ary olona ao amin'ny fianakavianao, ary koa ny antsipiriany hafa mety hisy fiantraikany amin'ny fiarovana ny fiainanao manokana. mihazakazaka a jereo ny mombamomba anao Mety ho fomba tena ilaina hanangonana hevi-baovao momba ny dian-tongotrao nomerika ary hahazoana antoka fa tsy misy fanontaniana tsy voavaly, tsy misy farany, na hamantatra izay mety tsy ilaina amin'ny Internet.
Rehefa manao fizahana ambadika momba ny tenanao ianao dia tena ilaina ny miverina amin'ny fotoana mety indrindra. Izany dia hamela ny fomba fijery feno indrindra momba ny lasa ary hisoroka izay vaovao mety hanimba tsy hivoaka any aoriana any amin'ny lalana izay mety hiteraka olana amin'ny fahafahana ho avy toy ny fahazoana trano, asa, na manomboka fifandraisana vaovao mihitsy aza.
Amin'izao tontolo izao ankehitriny, ny Internet dia ampahany amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny olona maro. Na izany aza, na dia manome tombony sy fanamorana tsy tambo isaina ho an'ny mpampiasa aza izany, dia misy ihany koa ny loza mety hitranga amin'ny fampiasana serivisy an-tserasera.
Ny sasany amin'ireo fandrahonana mahazatra indrindra dia ny viriosy, ny malware ary ny fisolokiana phishing. Mety hampidi-doza ho an'ny mpampiasa ihany koa ny hackers amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny fitaovany tsy nahazoana alalana na fangalarana ny mombamomba azy manokana toy ny tenimiafina sy ny laharan'ny carte de crédit. Na inona na inona votoaty tadiavinao amin'ny Internet dia zava-dehibe ny mahafantatra ireo loza ireo mba tsy hisy fiantraikany amin'ny traikefanao an-tserasera.